Ungasusa kanjani ama-duplicates ku-Excel - [Ukubonisana kwamazwe ngamazwe]
> Ungasusa kanjani ama-duplicates ku-Excel
Indlela yokuqeda ama-duplicates ku-Excel
Ungasusa kanjani izimpinda ku-Excel
Fihla okuphindaphindiwe ku-Excel
I-Formula ukuthola izimpendulo ku-Excel
Qinisa imigqa emibili e-Excel
Thola izimpinda ku-Excel
I-Excel khipha okuphindaphindiwe kusuka kukholomu
Bala okuphindwe kabili ku-Excel
Ukuthola okuphindaphindiwe ku-Excel, susa imigqa ephindwe kabili ku-Excel, futhi uqede ama-duplicates ku-Excel yonke into efanayo, ngomsebenzi owodwa olula ohlanganisiwe ku-Excel ukwenza idatha yokunciphisa idatha.
Ngezansi, sizophinde siphakamise esinye isisombululo nge-Excel ukususa okuphindwe kabili ifomula, engasetshenziselwa ukukhomba okuphindaphindiwe ku-Excel bese ufihla okuphindaphindiwe ku-Excel, ngaphandle kokuthi kufanele uqede ama-duplicates ku-Excel.
Isixazululo esisodwa esisheshayo nge inkinobho elula ukususa zonke izimpinda, nesinye isixazululo ngokusebenzisa imisebenzi namafomula, okulula kakhulu, ukuwabona.
Ukuhlelwa uhlu nokususa okuphindaphindiwe kuyinto ejwayelekile futhi ewusizo, uma usebenza ngezinhlu zamadatha: amakheli we-imeyili, izinombolo ze-invoyisi, amanani, ...
Isixazululo esisodwa sokusheshisa amasethi amakhulu yedatha kungaba ukusebenzisa i-Notepad ++.
Okunye kungenzeka ukusebenzisa i-Excel 2013 kusuka ku-Microsoft Office 2013 suite.
Ungasusa kanjani ama-duplicates ku-Excel : Ungasusa kanjani izimpinda ku-Excel - isethi yedatha engaqondakali
Ungasusa kanjani ama-duplicates ku-Excel : I-Excel khipha okuphindaphindiwe ohlwini - isethi yedatha engaqondakali ekhethiwe
Kusukela ngeqoqo lakho lemininingwane, khetha ikholomu (ama) ofuna ukususa ama-duplicate.
Bese, kusukela kwimenyu ye-DATA, khetha "Susa okuphindwe kabili" izinketho.
Ungasusa kanjani ama-duplicates ku-Excel : Ungasusa kanjani izimpinda ku-Excel
Ku-popup, khetha uma idatha yakho inesihloko noma cha (okusho, umugqa wokuqala ongacatshangwa kulo msebenzi), kanye namakholomu ofuna ukuwacabangela, bese uchofoza Ok. Nendlela ukususa imigqa emibili ku-Excel!
Isebenza ngisho namakholomu amabili, amakholomu amathathu, noma ngaphezulu. Konke okumele ukwenze, ukhetha amakholomu amaningi aqukethe idatha njengoba kudingekile, futhi lo msebenzi uzosusa izimpinda. Le ndlela yokuqhathanisa amakholomu amabili ukuthola izimpendulo ku-Excel, futhi isebenza ngamakholomu amaningi uma kunesidingo.
Ungasusa kanjani ama-duplicates ku-Excel : Idatha ye-Excel isuse okuphindaphindiwe okukhethwa kukho okuzenzekelayo
Kufanele uthole isiqiniseko ngenani leziphindaphindiwe ezisusiwe kanye namanani ayingqayizivele asele.
Ungasusa kanjani ama-duplicates ku-Excel : Susa ama-duplicates emlayezo we-Excel 2013 wokuphumelela
Okokugcina, ungase ufune ukuhlunga idatha, manje ukuthi lezi ziphindaphindiwe ziqedile, ukuba nehlu lokuhlanza.
Ukugcina ukukhetha kwakho, kumenyu efanayo ye-DATA, ukhethe ukwenyukela noma wehla uhlobo, futhi voilà!
Ungasusa kanjani ama-duplicates ku-Excel : Imenyu yokuhlunga idatha ye-Excel
Hlunga noma kusuka kokuncane kunazo zonke kuya kokukhulu, noma kusuka kukhulu kunama-smalles, kuye ngokuthi isethi yedatha, nesidingo salo.
Ungasusa kanjani ama-duplicates ku-Excel : Idatha ye-Excel ihlelwe ngaphandle kokuphindaphindiwe
Ukuze ufihle okuphindaphindiwe ku-Excel, futhi ube nededuplication yedatha ezogcina imininingwane yonke esikhundleni sokususa okuphindaphindiwe, yenza lokhu okulandelayo. Kungenye indlela yokubona okuphindaphindiwe ku-Excel ngamafomula, esikhundleni sokusebenzisa umsebenzi owakhiwe. Izophinde ithole amanani ayingqayizivele kuma-columns amaningi e-Excel, ngezinyathelo ezimbalwa ezisheshayo nezilula:
Engeza ikholomu entsha kusethi yedatha, ngaphambi noma ngemva kwedatha,
Hlela idatha ngekholomu. Uma amakholomu amabili noma ngaphezulu adingekayo ukuhlola okwephindaphindiwe, dala enye ikholomu ngokuqhathaniswa kwala ma columns amabili noma ngaphezulu, bese uhlelwa yilokho kubhalwa,
Kukholomu elingenalutho, engeza ifomula elandelayo (uma ikholomu ngu-A kanye neselula yokuqala engenalutho i-A2, ne-B2 iyiselula yokuqala ukuhlola impinda).
Manje, mane ukhethe yonke imigqa ngenani lokuphindaphindiwe kukholomu A, futhi ugcizelele kubo!
Zonke iziphinda manje sezikhonjisiwe, futhi ungenza okufunayo nazo: ukugqamisa okuphindaphindiwe, ukufihla okuphindiwe, noma ukubona ukuthi ususa kanjani imigqa ephindaphindiwe ku-Excel, ...
Ukususa okuphindaphindiwe, noma ukufihla okuphindaphindiwe ku-Excel, vele uhlunge kukholomu A value elingana nokuphindiwe, futhi wenze isenzo esifanayo. Lena indlela yokususa izimpinda ku-Excel 2013, ukwenza i-Excel ukususa okuphindwe kabili ohlwini, kodwa nokuthi ungasusa kanjani ama-duplicate ku-Excel 2013.
Ukuze ubale okuphindaphindiwe, eshadini samanje, engeza ikholomu engenalutho ngakwesokudla kwekholomu nomsebenzi wokuqhathanisa, isihlungi kukholomu A eyi-Original, bese ufaka ifomula elandelayo kukholomu B. Kufanele uqhubeke unesihluthulelo kukholomu C :
Futhi wandise ifomula kukholomu yonke. Ngakho-ke izobonisa isibalo seziphindaphindiwe ngenani ngalinye eliyingqayizivele!
okuphindiwe, I-Excel, I-Excel 2013 yenza uhlu bese ususa okuphindwe kabili, I-Excel yenza uhlu, Uhlu lwe-Excel oda lusa okuphindwe kabili, I-Excel khipha okuphindwe kabili, indlela yokususa iziphindaphindiwe ku-Excel, susa okuphindaphindiwe ku-Excel, uhlobo, ewusizo, ezihlukahlukene, ukususa kanjani ama-duplicates ku-Excel, indlela yokuthola amanani okuphindwa ku-Excel usebenzisa i-vlookup, indlela yokukhipha ama-duplicates ku-Excel, indlela yokususa iziphindaphindiwe ku-Excel, indlela yokuqeda ama-duplicates ku-Excel, ukuthi ungathola kanjani ama-duplicate ku-Excel, susa ama-duplicates ku-Excel, Fihla izimpinda ku-Excel, thola okuphindwe kabili kumakholomu amabili ku-Excel, ifomula ukuze uthole izimpendulo ku-Excel, qokomisa imigqa ephindwe kabili ku-Excel, I-Excel khipha amafomu okuphindaphindiwe,